गोरेको पक्राउ कि आत्मसमर्पण? “मैले किन मास्कले मुख छोप्ने? मुख छोप्नु पर्ने अरु नै छन् - गोरे
काठमाडौं । चर्चित साढे ३३ किलो सुन तस्कारी प्रकरणका मुख्य नाईके र सनम शाक्य हत्याका अभियुक्त भनिएका चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ मंगलबार पक्राऊ गरेको दाबी गरीए पनि घटनाले भने नयाँ मोड लिएको छ।
यतिबेला गोरे पक्राउ परेको नभई आत्मसमर्पण गरेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिने एउटा प्रमाण फेला परेको छ। तस्कर नाईके र सनम हत्याका मुख्य अभियुक्त गोरेले यहि जेठ ३ गते नेपाल मानव अधिकार संगठनलाई लेखेको निवेदनले यसलाई निकै वलियो प्रमाणका साथ प्रष्ट हुन्छ ।
पछिल्लो समय अपराधीहरुलाई इन्काउन्टर भैरहेको अवस्था र अपराध महाशाखाले गोरेको इन्काउन्टर नै गर्ने योजना गराएको सूचना चुहिएपछि उनले आफ्नो ज्यानको सुरक्षाको माग गर्दै आफु सुन तस्करीको भरिया मात्र भएको तर आफुलाई नै मुख्य नाईके बनाएर सिद्धाउने खेल भैरहेको भन्दै भनी संगठनलाई पत्र लेखी आत्मसमर्पण गर्न सघाउन माग गरेका थिए।
उनले सुन तस्करी प्रकरणका सबै जानकारीहरु अदालतमा दिने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरिदिनभन्दै संगठनलाई आग्रह गरेर पत्र लेखेका छन् । जेठ ३ गते गोरेले आत्मसमर्पण गर्न इच्छा जयार गर्दै मानव अधिकार संगठनलाई पत्र लेख्नु र त्यस लगत्तै उनी पक्राउ परेको भनी दावी गरिनुले पनि गोरे पक्राउ परेको नभई आत्मसमर्पण गरेको कुरालाई बल दिन्छ।
यस्तो छ गोरेले मानवअधिकार संगठनमा दिएको निवेदन:
प्रकाशित : मङ्गलबार, जेठ ०८, २०७५१६:०४
स्वीट्जरल्याण्डद्वारा नेपाललाई दुई अर्ब सहयोग !
श्रीमानसँग डिभोर्स गरेकी यी अभिनेत्री हर्षसँग प्रेमसम्बन्धमा!